URichard the Lionheart - iMikhosi
Wazalelwa ngoSeptemba 8, 1157, uRichard the Lionheart wayengunyana wesithathu osemthethweni kaKumkani Henry II waseNgilani. Edlalwa ukuba wayeyindodana ethandekayo kanina, u-Eleanor wase-Aquitaine, uRichard wayenabantwana abathathu abadala, uWilliam (wafa esemsaneni), uHenry, noMatilda, kunye nabancinane abane, uGeffrey, uLenora, uJohan noYohn. Njengabathengisi abaninzi beNgesi be-Plantagenet, uRichard wayeyinto yesiFrentshi kwaye ugxininiso lwakhe lwaluncike kwiindawo zasentsapho eFransi kuneNgilandi.
Emva kokuhlukana kwabazali bakhe ngo-1167, uRichard wasetyala imali ye-Aquitaine.
Efundiswe kakuhle kunye nokubonakala ngokukhawuleza, uRichard wabonisa ngokukhawuleza ubuchule kwimicimbi yempi kwaye wenza umsebenzi wokunyanzelisa ulawulo lukayise kumazwe aseFransi. Ngo-1174, bakhuthazwa ngumama wabo, uRichard, uHenry (uKumkani oselula), noGeoffrey (uDuke waseBrittany) bavukela ulawulo lukayise. Ukuphendula ngokukhawuleza, uHenry II wakwazi ukuphazamisa lo mvukelo waza wabamba uEleanor. Abazalwana bakhe banqotshwa, uRichard wangenisa ukuthanda kukayise waza wacela ukuxolelwa. Iinjongo zakhe ezinzulu zikhangelekile, uRichard wagxininisa ukugcina ulawulo lwakhe ku-Aquitaine nokulawula abahloniphekileyo.
Ukulawula ngentsimbi yentsimbi, uRichard waphoqeleka ukubeka phantsi ukuvukela okukhulu ngo-1179 no-1181-1182. Ngeli xesha, ukuphazamiseka kwavuka kwakhona phakathi kukaRichard noyise xa lo mfundi efuna ukuba unyana wakhe ahloniphe umntakwabo uHenry.
Ukugatya, uRichard washeshe wahlaselwa nguHenry the Young King kunye noGeoffrey ngo-1183. Ejongene nokuhlaselwa kunye nokuvukela kwamabhontshi akhe, uRichard wakwazi ukubuyisela ngobuchule ukuhlaselwa. Emva kokufa kukaHenry the Young King ngoJuni 1183, uHenry II wayala uJohn ukuba aqhube phambili.
Efuna uncedo, uRichard wenza umanyano kunye noKumkani Philip II waseFransi ngo-1187. Ngenxa yokuncedwa kukaFilipu, uRichard wanika amalungelo akhe eNormandy naseAnjou. Ngelo hlobo, emva kokuva kobuKristu behlulwa kwi- Battle of Hattin , uRichard wathatha umnqamlezo kwiTours kunye namanye amalungu aseFrance. Ngo-1189, amabutho kaRichard noFilipu babumbene ngokumelene noHenry kwaye banqoba u-Ballans ngoJulayi. Ukudibana noRichard, uHenry wavuma ukubiza igama lakhe njengendlalifa yakhe. Kwiintsuku ezimbini kamva, uHenry wafa waza uRichard wenyuka waya etroneni. Wathweswa isithsaba eWestminster Abbey ngoSeptemba 1189.
Ukuba ngu Kumkani
Ukulandela ukugonywa kwakhe, ukugqithiswa kwezobudlova ezichasene namaSemiti kwasuka kweli lizwe njengamaYuda aye avinjelwe kulo mbhiyozo. Ukugweba abenzi bokubi, uRichard waqala ukwenza izicwangciso zokuya emkhosini ukuya kwiLizwe elingcwele . Ukugqithisa ukunyusa imali emkhosini, ekugqibeleni wakwazi ukuhlanganisa umbutho wabantu abali-8,000 amadoda. Emva kokuba enze amalungiselelo okukhusela umbuso wakhe engekho, uRichard nomkhosi wakhe bahamba ehlobo le-1190. Udidi lwe-Third Crusade, uRichard uzimisele ukwenza umkhankaso ngokubambisana noFilipu II kunye noMlawuli uFrederick I Barbarossa woBukumkani baseRoma .
Ukuhamba kunye noFilipu eSicily, uRichard uncedise ukulungisa ingxabano elandelwayo kwisiqithi esabandakanye udadewabo uJoan waza wenza umkhankaso omfutshane wokulwa no-Messina. Ngeli xesha, wavakalisa umntakwabo, uArthur waseBrithtany ukuba abe yindlalifa yakhe, ekhokela umntakwabo uJohn ukuba aqale ukucwangcisa ukuvukela ekhaya. Ukuqhubela phambili, uRichard wafika eKyprus ukuhlangula umama kunye nomtshakazi wakhe, uBerengaria waseNararre. Ukuxhathisa isiqithi sesiqithi, uIsake Komnenos, wagqiba ukunqoba kwakhe waza watshata noBerengaria ngoMeyi 12, 1191. Ukunyamezela, wangena kwiLizwe elingcwele e-Acre ngoJuni 8.
Ukufika, wanika inkxaso uGuy waseLusignan owayekulwela umngeni kuConrad waseMontferrat ubukumkani baseYerusalem. UConrad wayexhaswa nguFilipu noDuke Leopold V wase-Austria.
Ukubeka ecaleni ukungafani kwabo, abaCrofaders bathatha i-Acre ukuba ihlobo. Emva kokuyithatha isixeko, iingxaki kwakhona zavela njengoko uRichard echasa indawo kaLeopold kwiNkqubela. Nangona engekho ukumkani, uLeopold wenyuka waya kumyalelo we-Imperial forces eMhlabeni oyiNgcwele emva kokufa kukaFrederick Barbarossa ngo-1190. Emva kokuba amadoda kaRichard ahluthe ibhendi likaLeopold e-Acre, waseAustria wasuka waza wabuya ekhaya enomsindo.
Kungekudala emva koko, uRichard noFilipu baqala ukuphikisana malunga nesimo saseKhupro kunye nobukumkani baseYerusalem. Empilweni embi, uFilipu wakhetha ukuba abuyele eFransi eshiya uRichard ngaphandle kokubambisana ukujongana nemikhosi yamaSiladine. Ukunyuka esezantsi, wahlula uSaladin eAsuf ngoSeptemba 7, 1191, waza wazama ukuvula iingxoxo zoxolo. Ekuqaleni wahlulwa nguSaladin, uRichard wachitha inyanga yokuqala ye-1192 ekuqiniseni uAscalon. Njengoko unyaka unxibekile, izikhundla zombini uRichard noSaladin zaqala ukuba buthathaka kwaye amadoda amabini axoxa.
Ukwazi ukuba wayengenakuyibamba iYerusalem xa wayithatha kwaye uYohane noFilipu baceba ukumkhwela ekhaya, uRichard wavuma ukugubha iindonga e-Ascalon ngokutshatyalaliswa kweminyaka emithathu kunye nokufikelela kwamaKristu eJerusalem. Emva kokuba isivumelwano sisayinwe ngoSeptemba 2, 1192, uRichard waya ekhaya. Ukugqithwa kwinqanawa endleleni, uRichard waphoqeleka ukuba ahambe ngaphesheya kwaye wabanjwa nguLeopold ngoDisemba. Wavalelwa entolongweni yaseDürnstein waza waya kwi-Trifels Castle ePalatinate, uRichard wayegcinwe ngokukhululeka ekuthinjweni. Ukukhululwa kwakhe, uMlawuli oyiNgcwele oyiRoma , uHenry VI, wayefuna ama-150,000 amanqaku.
Ngoxa u-Eleanor wase-Aquitaine esebenzela ukuphakamisa imali, uJohn noFilipu banikela uHenry VI ama-80,000 amanqaku abamba uRichard kuze kube nguMichael 1194. Ukugatya, umbusi wamkela intlawulelo waza wamkhulula uRichard ngoFebruwari 4, 1194. Ebuyela eNgilani, UJohn ukuba angenise intando yakhe kodwa wathi igama lomntakwabo uyindlalifa yakhe yokunyusa umntakwabo uArthur. Xa imeko yaseNgilandi isesandleni, uRichard wabuyela eFransi ukuze ahlangabezane noFilipu.
Ukwakha intsebenziswano ngokumelene nomhlobo wakhe wangaphambili, uRichard wanqoba amaFransi amaninzi kwiminyaka emihlanu ezayo. Ngo-Matshi 1199, uRichard wagxininisa indlu encinane yeChalus-Chabrol. Ngobusuku boKwindla 25, ngelixa ehamba ecaleni kwinqanaba lokungqinga, wahlaselwa ehlombe lasekhohlo ngololo. Ayikwazi ukususa ngokwakhe, wabiza ugqirha owawuthatha umcolo kodwa wonakalisa kakhulu inxeba kwenkqubo. Ngokukhawuleza emva koko i-gangrene yahlala kwaye ukumkani wasweleka ngengalo kamama ngo-Ephreli 6, 1199.
Ilifa likaRichard lixutywe kakhulu njengelinye iphuzu lokukwazi ukulwa kunye nokuzimisela ukuqhubela phambili xa abanye begxininisa ubukhohlakali kunye nokunyaniseka kwendawo yakhe. Nangona wayeyiminyaka elishumi iminyaka, wayesebenzisa iinyanga ezilisithandathu eNgilani kunye ntsalela kumazwe akhe aseFransi okanye ngaphandle. Waphumelela ngumntakwabo uJohn.
BBC: uRichard I
Imbali yeTemplar: uRichard I
I-Sourcebook yexesha eliphakathi: uRichard I
Abamama AbangamaBugu Abaziwayo - kunye "noomama"
Uluhlu njengohlobo lokubuyisela umsebenzi kunye neParameter yeNdlela
I-Electron-Sea Model Definition